I-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex (MT5) I-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
I-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Ukuhweba okuguqukayo kungokunye kokuhweba okunzima kakhulu ngesikhathi esifanele. Lokhu kungenxa yokuthi ukuhweba okuguqukayo kuvame ukuhwebelana kuthathwe ngokumelene nomkhuba osungulwe noma ukuqondiswa komfutho. Enye indlela yokwandisa amathuba wokubeka isikhathi ukuhweba okuguqukayo kahle ngokuhweba endaweni yokuhlangana yamasignali wokuguqula.
Lelisu isu lokuhweba elilula elihweba ngokuhlangana komfutho nezinkomba zokuguqula umkhuba.
HL Cross for WPR Inkomba
1 HL Cross for WPR Inkomba
2 Ukuhambisa Isilinganiso Kuhlangana kanye kwehlukana
3 Ukuhweba Strategy Concept
3.1 Thenga ukusethwa kwezohwebo
3.2 Thengisa ukusethwa kwezohwebo
4.1 Imiyalo Yokufakwa Kwamasu Okuhweba Forex
4.2 Kunconywe i-Forex Metatrader 5 Ipulatifomu Yokuhweba
4.3 Ungayifaka kanjani i-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
I-HL Cross ye-WPR Indicator iyinkambiso elandelayo elandela isu elisuselwa ku-Williams Percentage Range (KU-PR) Inkomba kanye ne-Heiken Ashi Indicator.
I-Williams Percentage Range Indicator wuhlobo lwe-oscillator lwenkomba yezobuchwepheshe esetshenziselwa ukukhombisa amazinga entengo athengwe kakhulu futhi angaphezulu kanye nokuhlehliswa kwencazelo okuhambisanayo. Ibala ulayini we-Williams Percentage Range ngokuya ngomehluko phakathi kwentengo ephezulu kakhulu nokuvalwa kwentengo ehlukaniswe ngomehluko phakathi kwentengo ephezulu kakhulu nentengo ephansi kakhulu. Lokhu kusethwe kabusha n izinkathi okuvamise ukuba ngaso 14 izinkathi. Lokhu kudala umugqa oscillates ngaphakathi kobubanzi be- -100 futhi 0 nabamaki emazingeni -80 futhi -20. Imigqa ye-WPR yephula ngenhla -20 ikhombisa imakethe ethengwe ngokweqile, ngenkathi imigqa ye-WPR yehla ngezansi -80 ikhombisa imakethe ethe xaxa. I-HL Cross ye-WPR ithola amasiginali wayo wokuguqula isimo ngokuya kokweqa ulayini we-WPR ngaphezulu kwe- -50 umkhawulo. Isiphambano ngenhla -50 ibonisa ukuguqulwa kwesimo se-bullish, ngenkathi isiphambano ngezansi -50 ibonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish.
Inkomba yesibili lapho le nkomba itholakala khona yi-Heiken Ashi Indicator. I-Heiken Ashi Indicator iguqula ukuvulwa nokuvalwa kwamakhandlela ejwayelekile aseJapan ngokususelwa ekunyakazeni kwentengo okujwayelekile.
Isibonisi se-HL Sesikhombi se-WPR sikhomba ukuhlehliswa kwesimo ngokuya ngokuhlangana kwezinkomba ezimbili ezingenhla.
I-HL Cross ye-WPR Indicator yakha amadayimane nemicibisholo ukukhombisa ukuqondiswa komkhuba. Le nkomba ifaka umcibisholo okhomba phezulu ukukhombisa ukuguquka kwesimo se-bullish bese uhlela amadayimane e-lime ukukhombisa amazinga afanele wokulahleka kokuma kokuhweba kokuthenga. Ngokuphambene, ibuye ihlele umcibisholo okhomba phansi ukukhombisa ukuguqulwa kwesimo se-bearish bese uhlela amadayimane abomvu ukukhombisa amazinga afanelekile wokulahleka kokuhweba okuthengiswayo.
Abahwebi bangasebenzisa imicibisholo njengesignali yokungena yokuguqula isimo kanye namadayimane njengokubekwa kokulahleka kokumisa okulandelayo.
Ukuhambisa Isilinganiso Kuhlangana kanye kwehlukana
Isikhombi Sokuhamba Esimaphakathi Sokuhlangana kanye nokwehlukana, eyaziwa kakhulu njenge-MACD, i-oscillator yomfutho yakudala esekwe ekuweleni ngaphezulu kwezilinganiso ezihambayo.
I-MACD ibala umehluko phakathi kwesilinganiso sokuhamba esisheshayo se-Exponential Moving (UMAMA) futhi ihamba kancane EMA. Bese uhlela umehluko njengoba imigoqo ye-histogram ibizwa ngemigoqo ye-MACD. Iphinde ifake umugqa wesiginali osuselwa kumigoqo ye-MACD. Ulayini wesiginali ngokuyisisekelo i-Simple Moving average (Isikolo sebanga eliphezulu) umugqa ubalwe kusuka kumabha we-MACD.
Ulayini we-EMA ohamba ngokushesha uvame ukusethwa enkathini engu-12-bar, ngenkathi umugqa we-EMA opholile uvame ukusethwa njengesikhathi sama-bar-26. Ulayini wesiginali ngakolunye uhlangothi uvame ukusethwa ku- a 9 ukubalwa kwesikhathi. Noma kunjalo, lezi ziguquko zingashintshwa ukuze zivumelane nesu lomthengisi.
Amabha we-MACD amahle akhombisa ukuqondiswa kwesimo se-bullish, ngenkathi imigoqo ye-MACD engemihle ikhomba ukuqondiswa kwethrendi ye-bearish. Noma kunjalo, Imigoqo ye-MACD ekhuliswe ngokweqile kusuka maphakathi nayo, okuyi-zero kunamathuba aphezulu kakhulu okuguqulwa. Ama-crossovers phakathi kwemigoqo ye-MACD nolayini wesiginali akhombisa ukuguqulwa komfutho. Imigoqo ye-MACD ewela ngaphezu komugqa wesiginali ikhombisa ukuguqulwa kokuqina komfutho, ngenkathi amabha e-MACD ewela ngaphansi kolayini wesiginali akhombisa ukuguqulwa komfutho we-bearish. Ama-crossovers asuka ezingeni le-overextended avame ukuba yisignali ephezulu yokuguqula amathuba.
Ngaphandle kokuba yinkomba yokuthambekela nomfutho, i-MACD nayo ingasetshenziswa njengesisekelo sokukhomba ukwehlukahlukana. Ukwehluka phakathi kwesenzo sentengo ne-MACD kuvame ukuba yinkomba ephakeme yokuguqula amathuba.
Lelisu lokuhweba isu elilula lokubuyisela emuva lokuhweba elihlanganisa i-HL Cross yesiginali yokuguqula umkhuba we-WPR namasignali wokuguqula umfutho we-MACD.
Esikhathini se-HL Cross se-WPR Indicator, ukuvela kwemicibisholo kuzosetshenziswa njengesignali yokungena, ngenkathi omaka bedayimane bezosetshenziswa njengezinga elilandelanayo lokulahleka kwesitimela.
Ku-MACD, ama-crossovers phakathi kwemigoqo ye-MACD nolayini wesiginali ovela ngaphesheya kwephakathi, okuyi-zero, izosetshenziswa njengesignali yokuguqula umfutho.
Ukuhlangana phakathi kwalezi zimpawu ezimbili zokuguqula kuzosetshenziswa njengokusetha ukuhweba okuguqukayo.
Amabha we-MACD kufanele aqale kusuka ngaphansi kuka-zero.
Amabha we-MACD kufanele awele ngaphezu komugqa wesiginali okhombisa ukubuyela emuva ngamandla.
I-HL Cross ye-WPR Indicator kufanele ihlele umcibisholo okhomba phezulu obonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bullish.
Vula i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kwalezi zimpawu eziguqukayo ze-bullish.
Setha ukulahleka kokuma ngezansi kophawu lwedayimane.
Ukulandela ukulahleka kokuma ngaphansi kwezimpawu zedayimane likalika kuze kube kumiswa ngenzuzo.
Amabha we-MACD kufanele aqale kusuka ngenhla zero.
Amabha we-MACD kufanele eqe ngezansi komugqa wesiginali okhombisa ukuguqulwa komfutho we-bearish.
I-HL Cross ye-WPR Indicator kufanele ihlele umcibisholo okhomba phansi obonisa ukuguqulwa kwethrendi ye-bearish.
Vula i-oda lokuthengisa lapho kuhlangana khona lezi zimpawu eziguqukayo ze-bearish.
Setha ukulahleka kokuma ngaphezu kophawu olubomvu lwedayimane.
Ukulandela ukulahleka kokuma ngaphezu kwezimpawu ezibomvu zedayimane ezakhiwe zaze zavalwa.
Lelisu lokuhweba isu elihloniphekile lokuguqula ukuhweba elinamandla okukhiqiza ukuhweba ngamanani amahle womvuzo wobungozi osuselwe engcupheni ebekwe ekulahlekelweni kokuma. Noma kunjalo, leli qhinga alisebenzi kahle ezimeni zemakethe ezixakile. Kungcono ukusebenzisa leli su ezimweni zemakethe ezinamandla okuhamba ngomfutho oqinile. Lokhu kungaba yizimo ezihambisana nokuqhuma komfutho okungenzeka noma ukubuyela emuva kusuka ekusekelweni okukhulu noma ezingeni lokumelana.
Imiyalo Yokufakwa Kwamasu Okuhweba Forex
I-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 iyinhlanganisela yeMetatrader 5 (MT5) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Ingqikithi yaleli qhinga le-forex ukuguqula imininingwane yomlando onqwabelene nezimpawu zokuhweba.
I-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 inikeza ithuba lokuthola izici ezahlukahlukene namaphethini wamanani entengo angabonakali ngeso lenyama..
Ngokusekelwe kulolu lwazi, Abadayisi bangathatha ukunyakaza kwentengo okuqhubekayo futhi balungise leli su ngokufanele.
Ungayifaka kanjani i-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5?
Landa i-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5.zip
*Kopisha amafayela we-mq5 nama-ex5 ku-Directory yakho yeMetatrader / ochwepheshe / izinkomba /
Khetha Ishadi nesikhathi esibekiwe lapho ufuna ukuhlola isu lakho le-forex
Iya kwesokudla ukukhetha i-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5
Uzobona i-HL Cross ye-WPR ne-MACD Reversal Forex Trading Strategy ye-MT5 itholakala kuShadi lakho
*Qaphela: Akuwona wonke amasu we-forex eza namafayela we-mq5 / ex5. Amanye ama-templates asevele ahlanganisiwe nezinkomba ze-MT5 ezivela kwi-MetaTrader Platform.
Isiqephu esedlule2 MA MACD Breakout Forex Ukuhweba Isu
Isihloko esilandelayoInkomba yokusabalalisa ye-MT4
Heiken Ashi Smoothed 100 I-EMA Trend Bounce Forex Trading Strategy ye-MT5
I-Bollinger Band Trend Direction Momentum Breakout Forex Trading Strategy ye-MT5
Ama-Super Trend Averages Isu Lokuqhubeka Kwesikhathi Eside seTT5
Zigzag Support and Resistance Pin Bar Bounce Forex Trading Strategy for MT5
Isu Lesikhathi Eside Le-Bias Stochastic Reversal Forex Trading for MT5
CCI Trend Pullback Bounce Forex Ukuhweba Isu MT5
I-Simplified Fibonacci Trading Strategy namathuluzi owadingayo
Septhemba 18, 2017
Januwari 14, 2020